तनाव लिँदा शरीरमा हुनसक्छ स्वास्थ्य समस्या – bampijhyala.com
Home > शिक्षा/ स्वास्थ्य > तनाव लिँदा शरीरमा हुनसक्छ स्वास्थ्य समस्या
२१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०८:५७ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । तनावका कारण शरीरमा अनेक प्रकारका समस्या हुने गर्छन् । अत्याधिक तनावका कारण लगातार टाउको दुख्ने, अनिद्राको हुने, र पाचनप्रक्रियामा समस्या हुने गर्छ । फिजिसियन डा.रोगर हेन्डरसनले तनावका कारण शरीरमा निम्न ६ किसिमका समस्या हुने बताएका छन् ।
नेत्रविक्रम चन्द समूहकाे राजनीति किन र केका लागि? पावर र पैसाका निम्ति नहाेस्; पुर्व लडाकु
६ चैत्र २०७७, शुक्रबार ०८:३० bampijhyala 0
गर्मीका दिनहरूमा के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन ? डिहाइड्रेसन,...
२५ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १९:२९ bampijhyala 0
बाँपीझ्याला, एजेन्सी । समय सँगै उमेर बढ्नु साधारण कुरा...
१९ माघ २०७७, सोमबार २२:३९ bampijhyala 0
बाँपीझ्याला, एजेन्सी । महिनावारीका बेला केही महिलालाई टाउको दुख्ने,...
गीतकार दीप गिरीको म्यूजिक भिडियो ‘मनखाने माया’ सार्वजनिक २१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०८:५७
शिक्षण संस्था बन्द गर्ने प्रस्तावमा निजी विद्यालयको असन्तुष्टी २१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०८:५७
चक्रपथ बाहिरका सडक निर्माणका लागि प्राथमिकता २१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०८:५७
म्यानमारमा सैनिक कु विरुद्ध प्रदर्शनका क्रममा सैनिकले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा ८० जनाको मृत्यु २१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०८:५७
Ghode Jatra being celebrated today २१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०८:५७